Nhau - Tsika Yemahombekombe Chipo Rigid Mabhokisi
Chii chinonzi Rigid Bhokisi?
Mabhokisi akaomarara ndeimwe eakanyanya kutsvakwa-muzvikamu zvemabhokisi ekurongedza. Anenge zvese zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvinoshandisa Rigid kurongedza kune avo anodhura uye akaomesesa zvinyorwa. Rigid box kurongedza inozivikanwa nekugara kwayo, kuvimbika, simba, uye kusimba chimiro. Aya ma dielectri emabhokisi akaomarara akaomarara anotarisa pamapepa ekuputira anoshandiswa kune yekunze kweiyo inorema chipboard (grey pani) inopa mabhokisi chimiro chavo. Aya mabhokisi emukati akaomarara ane bepa rakanamatira kuti rirambe riine yunifomu panguva yese yekufumura. Kuti uve neruzivo rwakakwana rwekutakura, isu tinokurudzira kuti iwe ugare uchidhinda ma dielectric usati waenderera mberi. Izvi zvinokupa iwe zano nezve zviyero, zviyero, ruzivo rwevashandisi, nezvimwewo, zvakare iwe uchanzwisisa kuti bhokisi iri rinosangana nezvinodiwa zvako zvemuumbirwo here kana kwete.
Ndeipi Rigid bhokisi kurongedza inopa?
Tsika dzakaomarara mabhokisi dzinopa rusununguko rwese runogoneka rwekugadzira zvakapakurwa zvakavanzika Kubva pakuvhara kuisa zvikamu kune rutsigiro rwemukati uye sarudzo dzegungano, iwe unowana rusununguko rwekugadzirisa zvese zvinhu. Tsika Yakadhindwa Rigid mabhokisi ane mabhenefiti akakura seyakagadziriswa mhinduro, nekudaro, yega mhando inofarira kushandisa aya etsika akadhindwa mabhokisi. Nekudaro, iwo akasarudzika ayo mashoma anogona kutenga. Aya akajairwa mabhokisi akaomarara anopa dziviriro huru uye chengetedzo. Chigadzirwa chako chinogara chakachengeteka kana uri mumabhokisi aya. Uyezve, vatengi vako vanowana mukana wepamusoro uye unonakidza wevatengi. Ziva kuti ese emhando yepamusoro mabhokisi akaomarara anotorwa kubva pre-akacheka mabhokisi.
Kujairika kushandiswa kwemabhokisi akaomarara
Iyo yepamusoro kubatsirwa kweLuxury akaomarara mabhokisi ndeyekuti ivo vari nyore kugadzirisa. Iwe unogona kupurinda zvese kubva kumalogo kusvika kumazita emagetsi kune silhouettes emufananidzo wako wechiratidzo. Aya mabhokisi akaomarara anogona kugadzirisa zvese zvinoenderana neindasitiri yekudhinda. Heano mamwe akakosha poindi uye mabhenefiti emhando yepamusoro mabhokisi akaomarara: Kudhinda kwemavara kunowanikwa, Embossing, stamping, nevamwe. Hazvina mhosva nzvimbo inoshandiswa (maitiro pane ese anotarisana zviso) Iyo nzira yekuendesa uye kuungana kwemabhokisi akaomarara akazara kana chikamu akaungana. Inowanikwa mune ese maumbirwo uye masitaera aunogona kufungidzira
Customizable yepamusoro-kirasi kupedzisa .Inogona kuve yakashongedzwa nenhumbi sezvakaita ribhoni nezvimwewo. Iyi ndiyo mhinduro yakanakisa yekuratidza zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye nekupa chitarisiko chakatsvinda pasuru. Mhando dzinogona kushandisa edu emhando yepamusoro mabhokisi ekuratidzira pamwe nekushongedza kwepakeji, zvinonhuwira, wachi, mbatya, machokoreti, zvipo nezvimwe zvinhu zveumbozha. Bhokisi rakaunzwa rakaungana. Iko kune zvakanakira kuwana akaunganidzwa mabhokisi senge mashoma mashoma uye nguva yakashandiswa pakuiunganidza iyo mushure mekugamuchira. Nekudaro, nemabhokisi akaunganidzwa, iwe unofanirwa kugara uchifunga nezve saizi yeodha yako sezvo vhoriyamu inogona kumanikidza. Rigid Magnetic mabhokisi, Rigid Drawer mabhokisi, Rigid Mabhokisi ane muvharo, Rigid Foldable mabhokisi, Rigid Mabhokisi akaendeswa zvakapfava, Rigid Mabhokisi e-pop-up, Zvirinani kuodha sandara mabhokisi sezvo akaunganidzwa echipo mabhokisi anowanzove akakura kwazvo kuchengeta. Flat mabhokisi anofanirwa kuungana mune maminetsi uye zvakare zvakareruka kuchengetera uchienzaniswa neakaungana akaomarara mabhokisi.
Masitaera eakaomarara mabhokisi
Rigid box kurongedza kunouya mune dzakasiyana siyana masitaera uye maumbirwo. Kusarudzwa kwechimiro dhizaini uye dhizaini zvinoenderana newe uye zvinoenderana nekuzivikanwa kwako kwechiratidzo. Isu tichakurukura mashoma mashoma masitayera mune akaomarara mapakeji mhinduro. Rigid bhokisi rine magineti ekuvhara muvharo Ndeupi mufambiro wee-commerce kurongedza? Iri bhokisi rakaomarara rine magineti ekuvhara muvharo. Dhizaini yakasarudzika ine akaomarara akaomarara mabhokisi ekupakata inopa kunze kwenyika ruzivo kune vatengi. Bhokisi rakaomarara rakaomarara rine magineti ekuvhara chivharo inofanirwa kuve-yekugadzirisa mhinduro yebhizinesi rega rega rinosangana nevatengi vekirasi vatengi. Iwe unogona kuve nematte kana kupenya kupenya, yako kambani logo yakashongedzwa kana inopisa chitambi kumberi uye kumusoro, ita yakawanda yakasarudzika nemavara aunonhonga. Yakapetwa magineti akaomarara mabhokisi kana Asingapeteki magineti mabhokisi ari kuve anozivikanwa mazuva ano. Izvo zvakachipa, zvichienzaniswa nebhokisi rakaomarara rine magineti ekuvhara muvharo. Sekambani inopinza, imwe inogona kuchengetedza yakawanda nekuchinjika kune inopetwa magineti mabhokisi. Unyanzvi hwedu hunorara nemhando mbiri dzakakurumbira uye ese ari maviri anogona kugadzirisa ese marudzi ehunhu uye maitiro. Yakapetwa mabhokisi akaomarara akareruka kudura uye nyore kuunganidza zvakare. Iwe haudi nguva yakawanda kuti uigadzirire vatengi. Inzwa wakasununguka kutizivisa kana iwe uchida zano rehunyanzvi maererano neyepakeji yekugadzirisa mhinduro. Yakasarudzika cosmetic yakaoma bhokisi. Tsika yekupakata dhizaini inogarawo. Mutengi wedu anofarira yakapusa uye yakachena tema yavo yekushongedza ekurongedza mhinduro, saka ivo vanosarudza machena machena magadzirirwo evadhirowa. Yakachena chena glossy UV inonyatso kuenderana yavo yakasikwa uye zvakatipoteredza zvine hushamwari zvigadzirwa. Imwe yemapuratifomu anokanganisa emabhokisi akaomarara ndeyekuti uve nemabhandi ekunze mune yakadhindwa yeCMYK. Dhizaini dhizaini inoita kuti mabhokisi ekuchengetera anakidze, matsva uye akasimba ayo anozobata kutarisisa kwevanhu vanotarisira chitarisiko chavo. Tsika Dzakaomarara mabhokisi dzinopa kuita kwakasiyana-siyana kune chako chigadzirwa kuchengetedza chigadzirwa kubva pachiedza uye zvimwe zvakatipoteredza zvinhu pamwe nekuchengetedza uye kuchengetedza kumabhodhoro ako egirazi. Tsika yezvishongo mabhokisi akaomarara. Iyo Tsika yezvishongo mabhokisi akaomarara akateedzana ezvigadzirwa zvemadhizaini emhando yepamusoro yezvishongo. Izvo zvinhu zviri mukati mhete, zvishongo, zvishongo, zvishongo. Mabhokisi ese ane zvinobvisirwa nhema velvet yekuisa pakuratidza chigadzirwa. Unogona kugadzirisa dhizaini yako pavara, logo zvinhu, uye kupedzisa. Kupisa Kumaka kana Spot UV pakujekesa zita rako uchishandisa rakadhindwa bepa riine dhizaini dhizaini inoenderana bhokisi bhokisi dhizaini bhokisi rinotaridzika neimwe nzira. Iwe unogona kushandisa ribhoni sechinhu chinowanikwa kune rako rakaomarara bhokisi bhokisi. Aya maribhoni anowanikwa mune ese mavara uye matoni. Tiri kutarisira kukupa yakagadziriswa mapakeji mhinduro. Tsika dzakaomarara mabhokisi echipo. Tsika dzakaomarara mabhokisi echipo ari kudiwa zvakanyanya kumakambani aya anoda akasimba uye akaomarara mabhokisi ekupakira zvigadzirwa zvavo. Kunyangwe pahunhu hwavo hwakanakisa, yedu yetsika yakaoma mabhokisi ezvipo anogona kubata zvinorema nekuda kwesimba rakasimba. Iko kushandiswa kwekutanga kwebhokisi rakaomarara kupa kunaka kune chigadzirwa. Kwete izvozvo chete asi zvakare zvakakura mukufadza vatengi mune yakasarudzika nzira. Gadzira mufananidzo wechiratidzo uchishandisa mashoma akasiyana uye maumbirwo ezvigadzirwa zvakasiyana. Anowoneka akaomarara mabhokisi ari kufamba mazuva ano. Izvi hazvisi nyore chete kuchengeta, asiwo zvakare nyore kuungana. Nekudaro, ivo vari kumusoro kudiwa. Makambani mazhinji akaomarara ekupakata ari kutsvaga kupa vatengi vavo chiitiko chakadai chavanogona kugovana nevamwe. Tsika dzakadhindwa dzinoomeswa mabhokisi akaomarara anoshanda seyekushambadzira chishandiso.Rigid kenduru bhokisi, akaomarara zvipo mabhokisi ane muvharo, akapetwa akaomarara mabhokisi ane zvivharo, uye magineti kurongedza mhinduro kwauri. Unogona odha akaomarara echipo mabhokisi pamitengo yezvakawanda neBlue Box Packaging.
Tsika dzakaomarara chokoreti mabhokisi
Ndiani mune zvakasikwa asingade chokoreti? Shandisa tsika dzakaomarara chokoreti mabhokisi kuita kuti chigadzirwa chako chikurumbire pamashefu echero chitoro. Iyi tsika yakadhindwa yakaoma mabhokoreti mabhokisi anopa runako uye nyasha. Zvakare, iwe unogona kuwedzera runako uye kukosha kune chako chigadzirwa. Chigadzirwa chako chinoshamisa chinotaridzika kunge chinoshamisira mumabhokisi anoyevedza. Dhizaini yemabhokisi akaomarara anoenderana newe. Ndeipi nzvimbo yauri kuda kutora chigadzirwa chako? Zvakawanda sei chigadzirwa ichi chinoreva kwauri? Pamwe chete neiyi mhinduro yekupakata, unogona kugadzira ruzivo rwechigadzirwa uye kumanikidza vatengi vazhinji kuti vatenge chigadzirwa chako. Raymin Ratidza rave richidada kushandira vatengi varo kwandiri kupfuura makore gumi. Tiri kushanda seyakavimbika mapakeji mhinduro mupi kumakambani akaomarara ekurongedza. Chikwata chedu chehunyanzvi uye vane tarenda graphic vagadziri vanogara varipo kuti vakubatsire kunze neyako dhizaini dhizaini. Kana iwe uchinge uchinge uchatogadzira dhizaini yako yakasarudzika kurongedza, tinogona kuzviita zviri nani kwauri. Nyanzvi dzedu dzinogona kuita kuti zvigadzirwa zvako zvive zvehupenyu. Ukangosimbisa yako dhizaini, yako kurongedza ichaiswa mukugadzirwa. Mukati memazuva iwe unenge uine kurongedza kwako pasuo rako. Kurongedza kwakanaka kwakakosha kune chako chigadzirwa. Inopa chiremerera uye runako pamwe nekunakirwa kune chako chigadzirwa. Bata vatengi vedu vekutengesa nhasi nezvekotesheni yako uye ivo vachakupa inokwanisika yekutakura mutengo kwauri. Denga ndiyo muganho wemabhokisi akaomarara sezvavanoshanda zvinangwa zvakati wandei. Kugadzikana kwavo sutu yavo yakasimba. Pfungwa dzako chete ndidzo dzinogona kuisa muganho pane aya emabhokisi emhando yepamusoro. Chinhu chakanakisa ndechekuti iwe unogona kuwana tsika dzakaomarara mabhokisi zvinoenderana nezvaunoda uye zvaunofarira.
Rigid mabhokisi ebhizinesi
Mamwe mabhizinesi anoda kupa zvipo kune vatengi vavo. Nekudaro, ivo vanoda kuve nemapakeji ayo kwete chete anofadza vatengi vavo asiwo anoshanda chinangwa. Ivo vanotsvaga mhinduro dzakasimba dzakaomarara kurasa kunze pamwe nekukanganwa. Tora kucherechedzwa uye kufadza vatengi vako nemabhokisi edu akaomarara akaomarara. Ita kuti brand yako iwedzere kuoneka nekuita yako logo pane rimwe bhokisi.
Tora mitengo yakachipa pamagadzirirwo
Vanhu vane fungidziro yakajairika yekuti mabhokisi akaomarara vatengesi vanobhadharisa mari yakawanda yekugadzirisa. Zvisinei, icho hachisi chokwadi; zvinopesana nekufungidzira kusinozivikanwa, iwo anodhura. Bhuruu Bhokisi Packaging inopa yakagadzika, inokwanisika pamwe nekugadzirisa mhinduro kune ese mabrandi. Ndiyo nzira yako yekumira kunze kweruzhinji uye uchiita chimwe chinhu chakasarudzika kumutengi wako chinozovanyengerera kuti vadzokerezve kuburitsa kwako. Kana iwe uchitsvaga mutengo unodhura, odha huwandu hwakawanda. Kuraira nenzira yakadaro kunokubatsira iwe kuwana kumwe kuderedzwa kwemitengo. Izvi zvichave nechokwadi chekuti iwe unogara wakatsiga wetsiva echipo mabhokisi anowanikwa ekupa kunze.
Gadzirisa akaomarara mabhokisi chero chiitiko
Iko kune kuri kuwedzera kuitika kweakagadzirirwa echipo mabhokisi emichato, mazuva ekuzvarwa, mapato, kuungana pamwe chete, kusangana zvakare, zvibvumirano, mhemberero, uye mamwe ese mamwe marudzi ezviitiko. Kana iwe uri kuronga yako chiitiko pamberi penguva, iwe unogona kuraira yakaoma mabhokisi ezvipo kumberi kubva kuBlue Bhokisi Kuteedzera uye gadzira yako chiitiko chimwe-che-chemhando ine yakasarudzika maitiro ayo emabhosi ekupa-kure. Kushandiswa kwakawanda kwemabhokisi akaomarara. Kune mashandisirwo asingaverengeke emabhokisi akaomarara. Gadzirisa uye shandisa maererano nezvaunoda. Sezvatakambotaura, denga ndiro muganho wemabhokisi aya. Unogona kuvashandisa kunge zvipfeko zvakaomarara zvechipo mabhokisi, akaomarara echishongo zvipo mabhokisi, akaomarara mabhokisi ehembe, akaomarara emhando yepamusoro ekuputira mabhokisi, akaomarara emuchato zvipo mabhokisi, kana chero chimwe chinhu. Iyo nhema nhema yakaoma bhokisi ndiyo inonyanya kufarirwa nevatengi vedu. Nekudaro, iwe unogona zvakare kuwana chena, shava, uye chero imwewo ruvara iwe yaunoda. Saizi uye chimiro zvichavakirwa pane yako sarudzo uye zvaunofarira. Neiyi nzira, iwe unogona kuwana akaomarara mabhokisi erudzi chero rupi zvaro anoenderana nezvaunoda. Marii yakawanda inoita? Uyu ndiwo mubvunzo unowanzozivikanwa mupfungwa dzevatengi dzinovatadzisa kubva pakuita tsika. Eya, kuwana mhinduro kumubvunzo uyu hakuna kumbove kuri nyore. Iwe unogona kuzadza fomu inokurumidza online uye sarudza sarudzo maererano nezvaunoda. Paunenge wapedza, uchave watinya kamwe chete kubva mukutsvaga kuti zvingakudhurira zvakadii. Uya nekirasi kune yako brand uchishandisa akaomarara mabhokisi ane mabheji kubva kuBlue Box Packaging!